Boos Pramrama Guriga ah Oo Ka Imaanaya Bursa Waxaa Gaaray Poland | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaPanorama Guriga ah oo Ka Soo Baxday Bursa Ayaa Gaaray Poland
22 / 02 / 2020 16 Bursa, 48 Poland, YURUB, DUNIDA, tareenka, Gawaarida Tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka, VIDEOS
Wadada tareenka ee laga raaco Bursa ayaa gaadhay Poland
Shirkadda soo saarta 7 tram adduunka ee Bursa Durmazlar Holding 'Panorama' waa taraamka wadaniga Turkey ee ugu horeysay, soo diray in xubnaha ka ah EU Olsztyn, Poland. Tareenka, oo ka ambabaxay Bursa Khamiista, Janaayo 30, wuxuu gaadhay Olsztyn Khamiista, 13-ka Febraayo.
Durmazlar Shirkadda Holding waxay go’aansatay inay maal gasho kuna korto nidaamyada tareenka sanadka 2018 waxayna ku guuleysatay qandaraaska iibsiga gawaarida taraamka oo ay fureen Dawladda Olsztyn ee Poland isla sanadkaas. Heshiiska, oo daboolaya 12 wax-soo-saaritaan oo meesha ugu horeysa, ayaa la filayaa inuu kordho mudada soo socota oo uu gaadhayo ilaa 24. Qiimaha qandaraaska 12-gaari oo xamuul ah ayaa lagu dhawaaqay qiyaastii 20 milyan oo Yuuro. Awoodda 210 qof, Panorama waxay gaari kartaa 70km / saacaddii.
DurmazlarUgu dambeyntiina, waxay ku guuleysatay qandaraaska oo ah 177-gaari oo xamuul oo 100 milyan oo Yuuro ah oo ay fureen dowladda hoose ee Bucharest, oo ah caasimadda Romania. Shirkadda maxalliga ah ee Romania Astra ayaa ku guuleysatay qandaraaska tartanka iyadoo ay weheliso hay'adda CRRC ee Shiinaha DurmazlarNoqday astaanta la doorbiday ee Romania ka dib Poland. Waxay soosaaraysaa Bucharest 36-mitir Moodeel ah Durmazlardhamaan gawaarida ayaa gaarsiin doona 36 bilood.
Durmazlar Shirkadda Holding ayaa maanta noqotay shirkad dhoofisa iyadoo maalgashi ay ka sameysay waaxda nidaamyada tareenka, oo ay sanadkii 2009 ku soo qaadatay sumcadda Durmaray. Bilaabista maalgashi cusub go'aankii kobaca ee laga qaatay nidaamyada tareenka DurmazlarIyada oo xarunta cusub loo qorsheeyay in ay shaqeyso sanadkaan, waxay gaari doontaa awooda lagu soo saaro gawaarida sida metro, tareenada xawaaraha dheereeya ee xawaaraha sare ku dhex mara.
Durmazlargawaaridu waxay qaadaan rakaab gobolada badankood dalka. Sanadka 2018, khadka Istanbul Eminönü-Alibeyköy wuxuu siin doonaa Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. si ay u siiyaan 30 gaari oo taraam ah. keenida kadib heshiiska lala galay DurmazlarMoodooyinka Silkorm, Greencity iyo Panaroma ayaa la heli karaa. Durmazlar Waxay sidoo kale soo saartaa bohol xawaare sare leh oo tareeno ah oo loogu tala galay shirkadaha Faransiiska Alstom iyo South Korea Hyundai Rotem. (Source: World)
Mashruuca Akçaray Raadiyaha Iswiidhen
DHL Express ee duulimaadka baaskiilka ayaa ka baxaya Thailand
Duqa Magaalada Caasimadda Recep Altepe: Tareeno xawaare sare ku jooga Talyaaniga iyo Poland…
Gaadiidka Deegaanka Panorama wuxuu bilaabay inuu u adeego dadka Samsun
Durmazlaree Tram Panorama Qaranka, Poland
Baasaboorka Kestel Kestel ayaa ka yimid Poland
Konteynayaasha ka imaanaya Shiinaha waxay gaareen Rotterdam City, Netherlands
Tababarka Shiinaha oo gaaray dalka Iran
Dhiig cusub oo loogu talagalay TCDD - Erol Arıkan
Alstom Pendolino ayaa rikoodh cusub ku kordhiyay Poland
Gawaarida Nidaamka Tareenka ee hooseeya oo hooseeya ayaa laga qaadaa Lodz, Poland
Trams cusub ayaa imanaya Poland
Haamaha 15 iyo hawlgab ka soo baxaya Istanbul ee Islahiye
Durmazlar shirkadda haysta
Durmazlar qalabka tareenka
Boolishka Polish oo jilicsan
taraamka horeysay Turkey ee wadaniga ah
Ray News ayuu yiri:
Waad ku mahadsan tahay #durmazlar